HomeWararka CiyaarahaManchester United oo ku dooneysaa 13 milyan ginni Alex Telles
Manchester United ayaa diyaar u ah inay dhageysato dalabyada 13 milyan ginni ee daafaca bidix Alex Telles.
Iyadoo Luke Shaw uu dhowr kulan dhaawac ku seegay, Telles ayaa si joogto ah uga soo muuqday kooxda koowaad ee uu hogaamiyo Ralf Rangnick tan iyo markii la magacaabay bishii December, isagoo ku soo bilowday sideed kulan tartamada oo dhan.
Si kastaba ha ahaatee, tababaraha Jarmalka ayaan ku qanacsanayn in 29-sano jirkaan uu mustaqbal dheer ku leeyahay kooxda, waxaana uu diyaar u yahay inuu ku fasaxo qiimo sax ah.
Sida laga soo xigtay majaladda wararka Talyaaniga ee L’Interista , Inter Milan ayaa wax ka weydiisay helitaanka Telles, United ayaana tan iyo markaas ku wargelisay Nerazzurri in dalab 13 milyan ginni ah ay ku filan tahay inay daafaca uga soo qaataan Old Trafford.
Warbixinta ayaa intaa ku dartay in Red Devils aysan dooneynin inay u ogolaato xiddiga heerka caalami ee dalka Brazil inuu amaah kaga tago kooxda bishaan, lakiin waxa ay ku raaxeysan doonaan dalabyo lacageed oo degdeg ah ka hor maalinta Isniinta ee 11-ka habeenimo.
United ayaa horay ugu ogolaatay Anthony Martial inuu ka tago kooxda si uu amaah ugu biiro Sevilla , halka mustaqbalka Donny van de Beek iyo Jesse Lingard uu yahay mid aan la hubin.